QuickDo, iray-in-iray ho an'ny fihetsiky ny multitouch sy multitouch (Cydia) | Vaovao IPhone
QuickDo, iray-amin'ny-iray ho an'ny fihetsiketsehana multitouch sy multitouch (Cydia)
Miandry ny fanavaozana an'i Auxo hifanaraka amin'ny iOS 8, dia mahita QuickDo, tweak tena tsara avy any Cydia izay mampivondrona ny fitantanana multitasking mitovy amin'ny fihetsika multitouch Auxo sy Activator mba hanatanterahana safidy isan-karazany. Ity rindranasa ity izay azo antoka fa tsy mahazo ny fiheverana rehetra mendrika azy, dia tsy isalasalana all-in-one izay mety hahaliana tokoa ho an'ireo izay mitady fomba hafa hampiasa multitasking tsy mila mampiasa na ny bokotra fanombohana ary miaraka amin'ny mety hanesorana haingana ny fampiharana ao ambadika. Asehonay aminao ny asany ao anaty videoreview izay tutorial kely ihany koa hianaranao ny fomba fanefena azy.
Ao amin'ny QuickDo isika dia afaka manavaka fizarana roa mba hahatakarana tsara kokoa ny fomba fiasan'ilay tweak, na dia miharihary aza fa mifamatotra akaiky izy ireo. Amin'ny lafiny iray ny fitantanana multitasking, ary amin'ny lafiny iray ny fanaingoana ireo fihetsika hanao asa. Raha mijery multitasking aloha isika dia afaka manavaka singa maromaro:
Fihetsiketsehana marobe: ny hetsika hidirana amin'ny multitasking.
Window multitasking - fomba vaovao hampiarahana miaraka amin'ny ivon-toerana maro samihafa sy foibe fanaraha-maso
Ao amin'ny Gestures Multitasking azontsika atao ny manamboatra ny fomba fanidiana fampiharana, amin'ny alàlan'ny fitsoraka tsotra izao hatrany ambany ka hatrany ambony, ary azontsika atao koa ny mamaritra hoe faritra aiza amin'ny faran'ny efijery no manao an'io hetsika io: feno na ampahany fotsiny aminy afaka mifangaro amin'ireo fihetsika hafa. Azontsika atao ihany koa ny manamboatra fihetsika mba hanovana fanovana haingana ny fampiharana, manomboka amin'ny sisin'ny sisin'ny efijery mankany amin'ny lafiny iray, mametraka ny isan'ny rantsantanana ilaina ary koa ny faritra mavitrika. Ity fihetsika ity dia ahafahantsika mandeha amin'ny fampiharana teo aloha na manaraka miaraka amin'ity fihetsika haingana «mamily pejy» ity. Farany manana ny «Quick Switcher» isika, fomba iray hanovana haingana ireo fampiharana amin'ny alàlan'ny fampiasana multitasking mahazatra an'ny iOS, ary azo ampiasana amin'ny fihetsika eny amin'ny zoro ambany amin'ny efijery. Aseho ao amin'ny horonantsary ny fomba fiasan'ny tsirairay amin'ireo fizarana ireo.
Ao amin'ny Window Multitasking izay azontsika atao ny manamboatra azy fomba vaovao fampifandraisana multitasking miaraka amin'ny foibe fanaraha-maso, tena mitovy amin'ny fomba anaovan'ny Auxo azy, fa miaraka amina kisary fidirana haingam-pandeha azo configurable. Azonao atao ny mamaritra ny bokotra hampiatoana na hampiatoana ny asan'ny iPhone (WiFi, Bluetooth, sns.). Ny fihetsika hanala an'ity «Multitasking Window» dia azo faritana ao amin'ilay faritra resahina etsy ambany.
QuickDo dia misy fizarana izay azontsika atao ny mihevitra mitovy amin'ny Activator. Azonao atao ny manamboatra fihetsika mba hanatanterahana asa, ary ny fahafaha-manao dia tsy misy farany. Paompy indroa amin'ny Touch ID hamaranana fampiharana, na handefasana multitasking, na handefasana rindranasa. Toy ny amin'ny Activator, azonao atao ny mamaritra hoe aiza no anaovana ilay hetsika (Springboard, ao anaty rindrambaiko iray, eo amin'ny efijery hidin-trano, na aiza na aiza), ny fihetsika tianao hampiasaina ary ny hetsika tianao ho raisina. Ilaina ny manome fihodinana roa amin'ireo safidy ireo satria maro ny azo atao ary azo antoka fa mihoatra ny iray no mahaliana anao.
Farany QuickDo dia mamela anao handrindra ny Touch ID ka amin'ny fikitihana azy fotsiny dia mivoaka avy ao anaty torimaso ny terminal, na mamorona hitsin-dàlana amin'ny efijery hidin-kazo hidirana haingana amin'ireo rindranasa tianao indrindra. Fampiharana iray izay tena manolotra be dia be, ary vidiny amin'ny $ 5,99 fa izany afaka manandrana mandritra ny telo andro tanteraka ianao hividy azy raha tsy tena liana ianao. Raha hametraka azy dia tsy maintsy ampidiro ny repo ofisialin'ny fampiharana: http://cydia.clezz.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » QuickDo, iray-amin'ny-iray ho an'ny fihetsiketsehana multitouch sy multitouch (Cydia)
Misaotra betsaka anao Luis 😉
Efa nanantena zavatra toa an'ity momba ity tweak ity aho, na dia tsy dia fantatra loatra aza, dia tena ilaina tokoa.
Misaotra ny asa vita 😉
Misaotra betsaka anao nitondra anay sy nanadihady ity fanovana ity. Mahafinaritra! Manana fanontaniana aho na izany na tsy izany, misy ve izay tsy manana afa-tsy ny manidy rindranasa amin'ny alàlan'ny fikosehana toa an'io, nataon'i Auxo na i Zephyr? Izany hoe, bebe kokoa amin'ny fomba zephyr izay manao an'izay ... tsy misy fanampiana hafa. Miteny amin'ny iOS 8.
Misaotra betsaka indray. Mirary ny soa indrindra.
Valiny tamin'i Alexandre
Azonao atao ny manamboatra an'io safidy io amin'ny Activator, ary hanao izany fotsiny izy. 😉
Philip dia hoy izy:
Ho an'i Alexandre, Quickdo koa dia manana io fiasa io
Valiny tamin'i Philip
Javier, eny fa tsy marina izany ary koa misy lesoka sy tsy fitoviana amin'ny fampiharana hafa. Tsy dia eo noho eo izy io, na akaiky aza, toa an'i Auxo, Zephyr na ity koa. Philip, napetrako ihany koa io, saingy te-hamboatra izay hanao an'izany aho (ary tsy ho lafo izany) raha azo atao. Ny zavatra tsara dia efa mivoaka amin'ny herinandro ambony i Auxo !!
Misaotra an'izy roa!
Quickdo dia manao izany rehetra izany ary maro hafa, ny fiasa dia mitovy amin'ny Zephyr. Efa hatramin'ny iOS4 no nampiasako azy, atoroko azy izany. Eny, lafo izany, fa raha mijery ny lafiny tsara dia manome anao fanampiana ho an'ny fitaovana 5, raha tadidiko tsara. Raha mila zavatra hatsarana bebe kokoa ianao, dia avy eo Auxo. Tsy dia lafo loatra izany? Izy io koa dia mandany loharano bebe kokoa.
Ho an'i Alexander. Quickdo dia manao izany rehetra izany ary maro hafa, ny fiasa dia mitovy amin'ny Zephyr. Efa hatramin'ny iOS4 no nampiasako azy, atoroko azy izany. Eny, lafo izany, fa raha mijery ny lafiny tsara dia manome anao fanampiana ho an'ny fitaovana 5, raha tadidiko tsara. Raha mila zavatra hatsarana bebe kokoa ianao, dia avy eo Auxo. Tsy dia lafo loatra izany? Izy io koa dia mandany loharano bebe kokoa.
Landa dia hoy izy:
Vao omaly i Luis no nametraka an'ity tweak ity ary nitady ny harato dia tsapako fa vitsy no mahalala momba azy, tena tsara izany; Nampiasaiko tamin'ny iOS 4 aho, saingy mahatalanjona izao ny fiovana. Ara-potoana foana. Etsy an-danin'izay, ireo izay te hanandrana zavatra mitovy sy tsara kokoa amin'i Zephyr, andramo ny TAGE ho an'ny ios 7 sy 8. FIOMBIANA
Valiny tamin'i Landa
Raha nanana quickdo tamin'ny iPhone 4 s aho fa efa ela no ela, fantatro ve sa matahotra ny hividy ilay lincemcia aho
Valiny tamin'i Alexandro